Dibadbaxyo ka Socda dalka Poland | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dibadbaxyo ka Socda dalka Poland
Dibadbaxyo ka Socda dalka Poland
Dibadbaxyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo keenaya in 3 meeloow hal meel garsoorasyaasha Maxkamadda Sare ee dalka Poland ay xilka ka dagaan ayaa ka dhacay dalka magaalada Warsaw.
Lech Walesa oo ka mid ah dadkii aas-aasay Abaal-marinta Nobel Prize ayaa ka mid ahaa dadkii magaalada Warsaw iskugu soo baxay. Dad badan oo isku yimid ayuu u sheegay in hogaamiyeyaasha midigta fog ee hadda talada dalka hayaa ay xilka ka degaan.
Waxa uu yir “Kii jabiya dastuurka iyo kala qeybsanaanta awooddu waa dambiile. Waa in wax kasta oo awooddeena ah aan sameynaa si aan dadkan shaqada uga erino oo dad kale aan u doorano.”
Walesa waxa uu saadaaliyey in talaabooyinka ay dawladani qaadaysaa ay dagaal sokeeye horseedayaan.
Ra’iisal Wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa Arbacadii shalay difaacay go’aanka hoos loogu dhigayo da’da hawlgabka ee garsoorayaasha Maxkamadda Sare
Mroawiecki ayaa sheegay in isbeddel dhinaca caddaaladda ah loo baahan yahay, caddaaladuna waa inay noqotaa, buu yiri, mid shacabka Poland ay la xisaabtami karaan. Beddelidda da’da hawgalka ayuu ku sheegay in dastuurka ay waafaqsan tahay. Dalalka kale ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayuu ku eedeeyey in ay olole ku hayaan dawladda uu shacabku soo doortay ee Poland.
Hase yeeshee, hogaamiyeyaahsa Midowga Yurub ayaa arrintan diiday, iyaga oo sheeegay in dimqoraadiyadda dalka Poland ay khatar ku jirto, isla markaana xukuumadda midigta jirta ku eedeeyey inay doonayso inay gacanta ku dhigto maxkamadaha.
Taliyaha Booliska Puntland oo ka qeyb galay dood ku saabsan caqabadaha soo wajaha dumar xilliga doorashada
DHAGEYSO:- Warka Habeenimo Radio Baidoa 22-6-2021
Qaban qaabada xuska todobaadka maalmaha xorriyadda oo si weyn looga dareemayo dalka
Taliyaha Booliska Puntland oo ka qeyb galay dood ku saabsan caqabadaha...
Qaban qaabada xuska todobaadka maalmaha xorriyadda oo si weyn looga dareemayo...
Wasaaradda arrimaha gudaha oo soo gabagabeysay shirka Khariiradeynta Khilaafyada degmooyinka gobalka...
Wasiirka Cadaaladda XFS Oo la kulmay Golaha Deegaanka Degmada Waajid iyo...